ज्ञानेन्द्र शाही र बचन सिंहबीच भाले भिडन्त, “लोकतन्त्र भनेको भिडतन्त्र हो, जहाँ पायो त्यहि जे पनि बोल्ने” भन्दै झपारे ऋषि धमलाए शाहीलाइ (भिडियो) – Manaslu Khabar
ज्ञानेन्द्र शाही र बचन सिंहबीच भाले भिडन्त, “लोकतन्त्र भनेको भिडतन्त्र हो, जहाँ पायो त्यहि जे पनि बोल्ने” भन्दै झपारे ऋषि धमलाए शाहीलाइ (भिडियो)
September 17, 2019 Banner / भिडियो / रोचक / समाचार / समाजNo Comment on ज्ञानेन्द्र शाही र बचन सिंहबीच भाले भिडन्त, “लोकतन्त्र भनेको भिडतन्त्र हो, जहाँ पायो त्यहि जे पनि बोल्ने” भन्दै झपारे ऋषि धमलाए शाहीलाइ (भिडियो)
काठमाडौं, ३१ भदौ । सामाजिक अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले नेपालगन्ज विमानस्थलमा भएको घटनामा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले झुट बोलेको दावी गरेका छन् । उनले विमानस्थलमा पर्यटन मन्त्रीलाई विमान ढिलाई गरेको बारे प्रश्न सोध्दा त्यहाँ कसैले पूर्वयुवराज पारस शाहको नाम कसैले नलिएको दावी फेरी गरेका छन् । सोमबार राति प्राइम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्रशारण भएको ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ कार्यक्रममा उनले फेरी यस्तो दावी दोहोर्याएका छन् । कार्यक्रमा शाही र राष्ट्रिय युवासंघ नेपालका सचिव बचन सिंहबीच चर्काचर्की भएको थियो ।युवासंघका सचिव सिंहले नेपालगन्ज विमानस्थलमा मन्त्री माथि भएको दुब्र्यवहार र विमानस्थल जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा गरेको हुलहुज्जतका कारण ज्ञानेन्द्र शाहीलाई कारवाही हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
शाहीले जहाज उडेको र त्यहाँ पर्खिएको विषयमा पनि पर्यटनमन्त्री र बुद्ध एयरले समेत झुट बोलेको दावी गरेका छन् । उनले भने योगेश भट्टराईले सय प्रतिशत झुट बोल्नुभएको छ ।जुन बेला योगेश भट्टराई यो ब्यवस्था ल्याउन कालो कोठरीमा लाठी खाइरहेको बेलामा तपाई कहाँ हुनुहुन्थ्यो ? सिंहले प्रश्न गरे, तपाईको वैधानिकता के हो ? नमिता सुमिता काण्डका बारेमा तपाई किन बोल्नुहुन्न ? सिंहले यो ब्यवस्था ल्याउन आफुले गोली खाएको बताए । उनले शाहीलाई राजावादी भनेर दावी गरिरहँदा शाहीले केपीशर्मा ओली नै राजावादी भएको बताए । शाहिले २०५१ सालमा पूर्वराजाको सरकार हुँदा ओली गृहमन्त्री रहेको बताए ।
शाहीले मन्त्रीले ब्यवधान ढिलो गराउँदा, एक घण्टा विमान ढिलाई गराउँदा मन्त्रीलाई पनि कारवाही हुनुपर्ने बताए । उनले नेपालगन्ज विमानस्थलमा आफुले मन्त्रीलाई अपमानजनक शब्द प्रयोग नगरेको दावी गरेका छन् । उनले आफुलाई विभिन्न जिल्लामा जान निशेष गरेको भन्दै युवासंघ कानुनको उल्लंघन गरेको बताए । शाहीले त्यसो भनिरहँदा उनले कानुनसंगत काम गर्न कतै रोक नहुने बताए । शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गर्न कतै नरोकिने उनले बताए ।
छक्का पञ्जा २” युट्युवमा…